Nhoroondo yeIndonesia | Kuparidza Panguva Yokupikiswa
Muna 1953, Peter Vanderhaegen akanzi ashumire semutariri wedunhu muIndonesia. Dunhu rake raibata nyika yacho yose uye raiva rakareba makiromita 5 100 kubva kumabvazuva kusvika kumavirira uye rakafara makiromita 1 800 kubva kuchamhembe kusvika kumaodzanyemba. Paaifamba achiparidzira mundima iyi yakakura, kazhinji kacho aisangana nezvinhu zvaityisa zvikuru.
Muna 1954, Hama Vanderhaegen vakaenda kumabvazuva kweIndonesia, nzvimbo ine zvitendero zvakasiyana-siyana. Nzvimbo yacho inosanganisira chitsuwa cheBali, icho chine maHindu akawanda; chitsuwa cheLombok necheSumbawa, zvakazara nemaMuslim; chitsuwa cheFlores, icho chine vanhu vazhinji vanopinda Roma; uye zvitsuwa zveSumba, Alor, neTimor, izvo zvine vakawanda vanopinda machechi akabuda mune yeRoma. Vachifamba nemugweje wechikepe parwendo rwavo, vakamboti paridzirei muzvitsuwa zvakasiyana-siyana vasati vasvika kuKupang, guta guru reTimor. “Ndakaparidzira muTimor kwemavhiki maviri,” vakadaro Hama Vanderhaegen. “Pasinei nokuti mvura yainaya zvakasimba, ndakapa vanhu mabhuku ose andaiva nawo uye vanhu 34 vakanyoresa kuti vagare vachitumirwa magazini uyewo ndakatanga kuitisa zvidzidzo zveBhaibheri zvakawanda.” Mapiyona chaiwo ndiwo akazobatsira vanhu ivavo kusvika paumbwa ungano muKupang. Mashoko akanaka akazopararirawo achibva ikoko kusvika kuzvitsuwa zviri pedyo zvinoti: Rotè, Alor, Sumba, neFlores.
Vafundisi vemachechi akabuda mune yeRoma vaiva muKupang pavakaona kuti vanhu vavo vaibvuma kuparidzirwa neZvapupu zvaJehovha vakanzwa godo, vakaita sevachaputika nehasha. Mumwe mufundisi ane chinzvimbo chepamusoro akaudza mumwe murume wechikuru ainzi Thomas Tubulau uyo aiva neruoko rumwe chete aiita basa rokugadzira migomo nemapoto, kuti arege kudzidza neZvapupu, uye akamutyisidzira achiti akasasiyana nezvekuudza vamwe zvaakanga adzidza, paizofa munhu. Thomas akapindura noushingi kuti: “Hazvitaurwi nemuKristu zvauri kutaura izvozvo. Mundione futi kuchechi kwenyu!” Thomas akazova muparidzi woUmambo anoshingaira, uye mwanasikana wake akazova piyona chaiye.
Kunyange zvakadaro, vafundisi vomuTimor vainge vakatsunga kuti Zvapupu zvaJehovha zvimiswe. Muna 1961, vakanyengetedza Dhipatimendi Rinoona Nezvezvitendero uye vakuru vakuru vemauto kusvika vabvuma kubhana basa rokuparidzira paimba neimba. Saka hama dzaitofanira kuchinja nzira dzokuparidzira nadzo. Vakatanga kutaura nevanhu vaiva pamisika nepamatsime, varedzi vaibuda mumvura nehove dzavo uye mhuri dzaiuya kumakuva dzichigadzira-gadzira kuti kugare kwakachena. Papfuura mwedzi mumwe chete, vakuru vakuru vemauto vakazochinja pfungwa, ndokuzivisa paredhiyo kuti machechi ose omuTimor akanga aine rusununguko rwekuita mabasa awo. VeDhipatimendi Rinoona Nezvezvitendero pavakasimbirira kuti kuparidza paimba neimba kwakanga kuchiri kurambidzwa, hama dzakabva dzati vaite zvokunyora pasi mashoko avo, ivo ndokubva varamba. Hama dzakabva dzatangazve basa rokuparidza paimba neimba uye hadzina kuzonetswa.
Paakasvika muPapua muna 1962, mamishinari aiti Piet naNell de Jager uye Hans naSusie van Vuure, akatangawo kupikiswa nevafundisi vemachechi anozviti ndeechiKristu. Vamwe vafundisi vatatu vakavinga mamishinari acho vakavapengera vachiti vakurumidze kubva imomo vanoparidzira kune imwe nzvimbo. Muzvinyorwa zvavo uye mumharidzo dzavo neparedhiyo, vafundisi vaipomera Zvapupu zvaJehovha nhema vachiti zvinokonzera kuti vanhu vapandukire hurumende. Munhu wese wechitendero chavo aitanga kudzidza nemamishinari acho, vaimunyengetedza kana kumutyisidzira kana kumupa zvinhu kuti asaenderere mberi nekudzidza. Vakanyengetedzawo madzishe omumatunhu avo kuti amise basa rokuparidza.
Zvavaiita izvi zvakavadzokera mumwe ishe paakadana mamishinari kuti ataure nevanhu vomumusha make. “Pashure pokunge ishe iyeye aunganidza vanhu vake, ini naPiet takapa hurukuro pfupi mbiri tichivatsanangurira zvakaita basa redu,” akadaro Hans. “Madzimai edu akabva avaratidza magogodzero atinoita pamadhoo avo, zvatinoita tikanzi tipinde mumba uye mapiro atinoita mharidzo pfupi yeBhaibheri. Ishe wacho nevanhu vake vakafarira zvatakavaratidza uye vakati tienderere mberi zvedu nebasa redu takasununguka.”
Izvi zvaigara zvichiitika. Kashoma maMuslim paaipikisa basa redu rokuparidzira; vafundisi vemachechi anozviti ndeechiKristu ndivo vaigara vachitipikisa. Nanhasi ndizvo zvichiri kuitika.
‘Kuendeswa Pamberi Pemagavhuna Kuti Zvive Uchapupu’
Jesu akaudza vadzidzi vake kuti: “Muchamanikidzwa kuenda pamberi pemagavhuna nemadzimambo nokuda kwangu, kuti zvive uchapupu kwavari uye kune mamwe marudzi.” (Mat. 10:18) Mashoko aya agara achingobuda pachena kuti ndeechokwadi muIndonesia.
Muna 1960, mumwe murume wokuNetherlands aigara muJakarta airemekedzwa zvikuru semunhu akadzidza nezvezvitendero, akabudisa bhuku raishora zvakasimba Zvapupu zvaJehovha richivati vaKristu venhema. Bhuku iri rakaita kuti vafundisi vakawanda vapomere Zvapupu. Somuenzaniso, mune rimwe taundi vafundisi vakanyorera Dhipatimendi Rinoona Nezvezvitendero vachipomera Zvapupu kuti “zviri kuvhiringidza nhengo dzemachechi avo.” Vakuru vakuru vedhipatimendi iroro pavakadana hama kuti dziuye kuzopindura zvadzaipomerwa, hama dzedu dzakanyatsovaratidza chokwadi chenyaya yacho uye dzakatopupurira chokwadi. Mumwe murume ane chinzvimbo mudhipatimendi racho akayambira mumwe wake kuti: “Siyanai neZvapupu zvaJehovha. Zviri kumutsa vanhu vemachechi vari kurara.”
Kuburutsa mabhuku aParadhiso, 1963
Muna 1964, vamwe vafundisi vechechi dzakabuda mune yeRoma avo vaiva muPapua, vakakumbira Komiti yeParamende Inoona Nezvezvitendero Nemagariro Evanhu kuti ibhane basa reZvapupu zvaJehovha. Hama dzekuhofisi yebazi dzakabva dzakumbira kuti dzinomira pamberi pekomiti yacho kuti dzizvidzivirire. “Takataura nekomiti yacho kweinenge awa uye takanyatsotsanangura zvakaita basa redu rokudzidzisa vanhu Bhaibheri,” akadaro Tagor Hutasoit. “Mukomiti yacho maiva nemumwe murume weimwe chechi yakabuda muRoma uyo akatipomera zvenhema achiti taikonzera kunetsana kwezvitendero muPapua. Asi nhengo dzakawanda dzekomiti yacho idzo dzaiva maMuslim, dzakatinzwisisa. Vakatiudza kuti: ‘Bumbiro remutemo rinopa vanhu rusununguko rwekunamata, saka mune kodzero yekuparidza.’” Musangano uyu wapera, mumwe mukuru wemuhurumende aiva nechinzvimbo chepamusoro wemuPapua akati: “Hurumende itsva . . . iri kuramba ichipa vanhu rusununguko rwekunamata, uye izvi zvinoshandawo kuzvitendero zvitsva.”
Indonesia: Basa Rinotanga Kunzvimbo Dziri Kumabvazuva